Man United oo raadineysa laacib ay aad u doonayso Arsenal | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Man United oo raadineysa laacib ay aad u doonayso Arsenal
Man United oo raadineysa laacib ay aad u doonayso Arsenal
Posted by: Mahad Mohamed February 28, 2019
Himilo FM –Manchester United ayaa ku darsatay saxiixa daafaca dambeedka middig ee kooxda Crystal Palace Aaron Wan-Bissaka liiska xagaaga, sida laga soo xigtay warbixinno.
Red Devils ayaa durbadiiba qorsheyneysa inay mashquul ku noqoto suuqa xilli ciyaareedka marka uu idlaado , inkastoo ay jirto xaalad hubaal la’aan ah oo ku aadan cidda hoggaamin doonta.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa jecel inuu gacanta ku dhigo shaqada Tababarnimo ee rasmiga ah kooxda kaddib markii uu ku qaatay haatan waqti Fiican inta lagu guda jiro howshiisa kumeel gaarnimada, halka Mauricio Pochettino iyo Zinedine Zidane ay sidoo kale noqon karaan doorasho kale.
Wargeyska TalkSPORT ayaa soo jeedinaya in Wan-Bissaka uu ka mid yahay kuwa la beegsanayo, inkastoo United ay tartan kala kulmeyso kooxaha ay ku xafiiltamaan Premier League ee Arsenal iyo Manchester City.
Wan-Bissaka ayaa iska dhigay mid ka mid ah mustaqbalka daafacyada Yurub ee ugu fiican kaddib markii uu ku soo jiitay bandhigiisa Selhurst Park xilli ciyaareedkan isagoo lagu qiimeynayo 40 milyan oo ginni.
Warbixinta ayaa sidoo kale muujineysa in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Ivan Rakitic iyo daafaca dhexe ee Napoli Kalidou Koulibaly ay weli bartilmaameed u yihiin United.
Previous: Morooko: Guurka macallimad iyo arday 19 jir ah oo dhaliyay dood kulul
Next: Harry Kane oo laga yaabo inuu seego kulamada Arsenal iyo Liverpool